अरुको कुरामा धेरैनै चासो राख्छन् यी राशि हुनेहरु ! – List Khabar
Home / रोचक / अरुको कुरामा धेरैनै चासो राख्छन् यी राशि हुनेहरु !
अरुको कुरामा धेरैनै चासो राख्छन् यी राशि हुनेहरु !
admin January 10, 2022 रोचक Leaveacomment 91 Views
राशिचक्रका अनुसार, केही राशिहरुका कामनै अरुको कुरा गर्ने हुने गर्छ। आज हामी त्यस्तै केहि राशिहरुका बारेमा चर्चा गर्ने छौ, जो अरुको कुरा गर्नका लागि निकै प्रख्यात मानिन्छ। यी राशिका व्यक्तिहरुलाई वरपर भएका सबै घटनाहरुको बारेमा थाहा हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार, यी तीन राशिका मानिसहरु अरुको कुरा गर्न निकै माहिर हुने गर्छन्।
तर, यी व्यक्तिहरुले अरुलाई कष्ट दिने गरि वा अरुलाई हानि पुर्याउने गरि अरुको कुरा गर्छन् भन्ने आवश्यक भने छैन। उनीहरुलाई गोपनीयताको बारेमा राम्ररी नै थाहा हुन्छ। तर, जब उनीहरु आफ्ना मिल्ने साथीहरुलाई भेट्छन्, तब उनीहरुको अरुको कुरा गर्ने अभियान सुरु हुन्छ। आउनुहोस्, यस्तै धेरै कुरा गर्ने राशिहरुका बारेमा चर्चा गरौं।
यस राशिका व्यक्तिहरू प्रायः सबैलाई उनीहरुको रहस्य कुरा कसैलाई भन्दिन भनेर वाचा गर्ने गर्छन्, तर पछि सबैलाई भन्ने गर्छन्। यी व्यक्तिहरु अरुको रहस्य थाहा पाउन पहिले उनीहरुको विश्वास जित्छन्। यो कुरा कसैसंग गर्दिन भनेर उनीहरु वाचा गर्छन् । तर, पछि अरु व्यक्तिले आफ्ना सबै गोप्य कुरा कोसंग साझा गर्यो भनेर थाहा पाउन्जेलसम्म एकदम ढिला भइसकेको हुन्छ। तर, सबै कुरा अरुलाई सुनाएता पनि आफ्नो गल्ति कसरी लुकाउने भन्ने कुरा उनीहरुलाई राम्रोसंग थाहा हुन्छ।
तुला राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो न्यायका लागि चिनिन्छन् र यी व्यक्तिहरु आफ्नो जीवनमा उचित नियमहरु राख्छन्। उनीहरु दयालु, निर्दोष र मायालु स्वभावका देखिनुका साथै कुराकानी पनि निकै मिठो गर्छन्। उनका यस प्रकृतिका कारण उनीहरु खुल्लारुपमा कुराकानी गर्न पाउछन्। उनीहरू कुनामा गएर कुराकानी गर्न रुचाउदैनन्, बरु सार्वजनिक रूपमै सबैको अगाडीनै अरुको कुरा गर्न रुचाउछन्।
यी व्यक्तिहरु परिस्थितिको हरेक पक्षलाई ध्यान दिएर सुन्छन्। साथै, निर्णय लिनुअघि कथाको हरेक कोणलाई विचार गर्छन् र तुरुन्तै केहि कुरा विश्वास भने गर्दैनन्
यी राशिका व्यक्तिहरु कुरा गर्न र अरुको नाटक हेर्न मनपराउदैनन्। यद्यपि, उनीहरु मानिसहरुसँग सम्पर्कमा रहन भने निकै कोशिस गर्छन्। चाहे जति अरुको कुरामा नपर्न खोजे पनि, यी व्यक्तिहरु अरुको कुरा गर्न भने निकै रुचाउछन्। यी व्यक्तिहरु कुरा सुरु गर्नु अघि, अरुको एउटा कुरा निकाल्छन् र अरु कुराहरु आफै थपेर आफ्नो कुरालाइ निकै रोचक बनाउछन्। तर, अवश्य पनि, यस राशिका व्यक्तिहरूले यस कुरालाई स्वीकार भने गर्दैनन्।
Previous मनिषाले भावुक हुँदै भनिन्, मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने सोचेर नै हतारमा विवाह गरेकी थिए तर पाठेघरकै क्या न्स र हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइन
Next होसियार रहाैँ ! पानी चलाउदा वा नुहाईसकेपछी हात खुट्टाका छाला यसरी चाउरी पर्ने समस्या छ भने एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला